Ụgbọ elu ndị njem dara wee gbaa ọkụ na Texas, mmadụ 21 anwụghị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu ndị njem dara wee gbaa ọkụ na Texas, mmadụ 21 anwụghị
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ụgbọ elu ndị njem dara wee gbaa ọkụ na Texas, mmadụ 21 anwụghị.
Dị ka onye uwe ojii mpaghara Troy Guidry si kwuo, ndị njem na ndị ọrụ ụgbọ mmiri iri abụọ na otu ahụ mere njem ahụ n'udo, n'agbanyeghị na otu onye nọ n'ụlọ ọgwụ nwere mmerụ azụ.
Ihe mberede a mere na Waller County, na nso obodo Katy, na nso ọdụ ụgbọ elu Executive Houston.
N'agbanyeghị oke ọkụ nke ụgbọ elu ahụ mebiri, ọ nweghị ihe nwụrụ na ya, ma ọ bụ n'ala ma ọ bụ n'etiti ndị njem.
Ụgbọ elu ahụ, MD-80, na-efe ihe dị ka elekere 10 nke ụtụtụ, na-aga Boston, Massachusetts.
Ụgbọ elu ndị njem dara wee kpọọ ọkụ na Waller County, na nso obodo Katy, Texas na nso Ọdụ ụgbọ elu nke Houston taa, dị ka ngalaba nchekwa nchekwa Texas si kwuo.
Ụgbọ elu ndị njem, na MD-80, gbadara wee gbawa ọkụ, dị ka ihe nkiri si dị n'ebe ahụ.
N'ụzọ dị ịtụnanya, mmadụ 21 niile nọ n'ụgbọ ahụ gbapụrụ n'ụgbọ elu ahụ, ndị isi obodo kwuru.
Ihe onyonyo si ebe ahụ na -egosi nnukwu anwụrụ ọkụ na -enwu ka ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ nwara imikpu mkpọmkpọ ọkụ ahụ.
Ebe ihe mberede a dị nso n'akụkụ ụzọ Morton na Cardiff. N'agbanyeghị oke ọkụ nke ụgbọ elu ahụ mebiri, ọ nweghị ihe nwụrụ na ya, ma ọ bụ n'ala ma ọ bụ n'etiti ndị njem.
A kọrọ na ihe mberede a mere ka ụgbọelu ahụ, MD-80, na-apụ n'elekere 10 nke ụtụtụ obodo ya, na-aga Boston. N'ịga n'ebe ugwu, o doro anya na ọ rughị elu na njedebe nke runway wee gafere ụzọ kama, n'ikpeazụ kwụsịtụ ma nweta ọkụ.